Daawo sawiro: Senator Cabdi Qeybdiid oo gurigiisa la galay & ciidamadii gashay oo
Waxaa weli iska soo daba dhacaya wararka la xiriira ciidamadii maanta weeraray hoyga Senator Cabdi Qeybdiid oo ka tirsan xildhibaanada aqalka sare ee Baarlamanka Somalia.
Sida ay sheegayaan warar goor dhow na soo gaaray ugu yaraan 40 askari oo ka tirsanaa ciidamadii fuliyey howlgalkaas ayaa xabsiga loo taxaabay ka dib amar ka soo baxay taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed Jen. Gorod oo arintaan loo xilsaaray.
Warka ayaa intaas ku daraya in ciidamada la xirxiray ay ku jiraan labo sarkaal, waxaana socda weli baaritaano lagu hayo saraakiil iyo ciidamo kale oo lagu tuhunsan yahay iney falkaas ku lug lahaayeen.
Madaxweynaha dowlada Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa ku amray taliyaha ciidanka Milatariga Soomaaliya in baaritaan deg deg ah lagu sameeyo falkii ciidamo ka tirsan Milatariga ku galeen guriga Senetar Cabdi Qeybdiid, lana ciqaabo cidii falkaasi ka dambeysay.
Ciidamada galay hoyga senator Qeybdiid ayaa baaritaan xoog leh ku sameeyey guriga xili uu isagu ka maqnaa, lamana oga illaa hadda cida amarkaasi bixisay iyo ujeedada laga lahaa baaritaano ayaana weli socda.